Semuenzaniso, kana tarisiro yako iri kutsvaga sevhisi nyowani yekushandira, mushambadzi anotarisana nekutsvaga uye shanduko dzinogona kutariswa mukuita nepo mutungamiriri weIT angave akatarisa pazvinhu zvekuchengetedza. Zvakakosha kuti iwe utaure kune vese - uye kazhinji zvinoda kuti iwe unangise chimwe nechimwe nemashambadziro chaiwo nezviri mukati.
Kutendeuka - Kambani inotarisa pane zvirimo izvo zviri kunyanya kutariswa pane yavo saiti pane kuzivisa iwo personas ari kunyatso kutyaira shanduko. Kana 1% yevashanyi vesaiti yako ikashanduka ikava vatengi, iwe unofanirwa kunongedza iyo 1% uye uone kuti ndivanaani, chii chakavamanikidza kuti vatendeuke, wobva waona kuti vangataura sei nevamwe vakaita saivo.
nzvimbo - Zvemukati mekambani zvinotaura zvakanangana nemhedzisiro yebhizinesi yavo yavakapihwa neplatifomu asi ichiregeredza kusarudza kuti chikuva chinobatsira sei chinzvimbo chebasa mukati mekambani. Makambani anoita zvisarudzo zvekutenga pamwe chete, saka zvakakosha kuti chinzvimbo chimwe nechimwe chakakanganiswa chinoziviswa.
Susan, Chief Marketing Officer - Sue ndiye anoita sarudzo-kana zvasvika pakutenga tekinoroji kubatsira zvinodiwa nekambani yake. Sue anoshandisa kuburitsa kwedu kune ese maviri ekutsvaga uye ekushandisa ekutsvagisa.
Iyi yakanaka vhidhiyo kubva Marketo tsananguro yemunhu mutengi anovabatsira kuti vazive maburi mune zvirimo uye nemabatiro echokwadi vateereri vangangotenga zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Marketo anopa zano anotevera maprofayiri akakosha anofanirwa kugara achiverengerwa Mutengi Persona:
Isu tinowanzo kutanga nekuongorora vatengi vedu varipo tobva tashanda nzira yedu kudzokera kune vakawanda vateereri. Kuyera munhu wese hakune musoro… rangarira vazhinji vevateereri vako havazombotengi kubva kwauri.
Mutengi Personas anofanirwa kudzokororwa uye kugadziridzwa sezvo sangano rako richichinjisa zvigadzirwa zvaro uye masevhisi uye ichiwana vatengi vatsva izvo zvisingaite zvakasikwa mumunhu wako wazvino.